11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE - ewa.mg
News - 11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE
Mitentina 518 tapitrisa euros ny
vola avy amin’ny Vondrona Eoropeanina (UE), iadiana amin’ny
fahantrana sy hanarenana ny toekarena eto Madagasikara. Avy amin’ny
Tahirimbola eorpeanina ho an’ny fampandrosoana andiany 11 è Fed ity
fanampiana ity, ao anatin’ny fandaharanasa Programme indicatif
national (PIN), ho an’ny fe-potoana 2014-2020. Miandraikitra ny
fandrindrana sady manara-maso ny fanatanterahana ny asa ny Birao
manohana ny fiaraha-miasa any ivelany (BACE).
Nilaza ny talen’ny BACE,
Rakotomahefa Bruno Maurille, fa mifandray amin’ireo minisitera
mahazo ny famatsiam-bola izy ireo, mijery ny tetikasa ho
tanterahina. Miantoka ny fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny
firindran’ny tetikasa izahay, raha vao nivoaka ny
Sehatra telo lehibe no voakasiky ny
11 è Fed ao anatin’ny PIN. Ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny
asa ho an’ny vahoaka (145 tapitrisa euros), ny lafiny
fotodrafitrasa ara-toekarena (230 apitrisa euros) ary ny
fampandrosoana ny eny ambanivohitra (130 tapitrisa euros). Manampy
ireo ny fanohanana ny fierahamonim-pirenena (8 tapitrisa euros) sy
ny fanamorana ny fiarahamiasa teknika (2 tapitrisa euros). Efa
nivoaka ny 96%-n’ny vola. Hanampiana ny tetibolam-panjakana ny 21
tapitrisa euros ambiny.
L’article 11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE a été récupéré chez Newsmada.
Ny fiandohan’ny herinandro teo, natao tany Naïrobi, ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny « toekarena manga », ny fitrandrahana ny fari-dranomasina. Nandray anjara tamin’izany ny minisitry ny Toekarena sy teti-pivoarana, i Napetoke Arsonaivo Marcel sy ny minisitry ny Jono, Andriamananoro Augustin. 6.000 ireo nandray anjara tamin’ny fivoriana avy amina firenena samihafa, nandinika sy namakafaka ny hahazoana tombontsoa ara-toekarena amin’ny fari-dranomasina, indrindra ny ho fiarovana izany. Lohahevitra nandritra izany fivoriana izany ny « Toekarena manga sy ny fandaharanasa hatramin’ny taona 2030 hisian’ny fampandrosoana maharitra ». Voadidina ranomasina 5.000 km i Madagasikara, nefa matetika ny fidiran’ny hafa an-tsokosoko. « Misy famatsiam-bola ho amin’izany toekarena manga izany ka nambara ho laharam-pahamehana ny fitrandrahana ny harena anaty ranomasina hatao amin’ny ara-dalàna », hoy ny minisitra, i Napetoke Arsonaivo Marcel. “Hanomezana asa ho an’ny tanora izany na hamoronan’izy ireo asa vaovao”, hoy ihany ny minisitra. Mitaky fampiasana teknolojia vaovao Mitaky fampiasana teknolojia vaovao anefa izany. Hatramin’izao, tsy hita ny fifehezana izany raha ny fahitana ireo sambo miditra an-tsokosoko manjono amin’ny fari-dranomasina eto an-toerana sy manondrana ny harem-pirenena, toy ny andramena. Samy nanaiky daholo ireo solontenam-panjakana tonga nivory ho fiarovana ny ranomasina. Niarahan’ny rehetra nanapaka, tamin’io fivoriana io, ny fanafainganana fandaharanasa sy ny tanjona ho an’ny fampandrosoana maharitra (ODD) nataon’ny Firenena mikambana. Raha fintinina, hahazoana mamorona asa sy miady amin’ny fahantrana ny ranomasina, ny ony ary ny farihy. Ireo no fototry ny fivoriana. Niantoka ny delegasiona malagasy ny Pnud, ary nanararaotra izy ireo nihaona tamin’ny minisitry ny Jono sy fiarovana ny morontsiraka any Kanada, i Jonathan Wilkinson, nifanakalo hevitra momba izay tokony hatao. Ho hita eo ny fampiharana izany amin’ny fitondrana manaraka. R.MathieuL’article « Toekarena manga »: mila fiarovana ny fari-dranomasina eto Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Lozam-pifamoivoizana :: Tovolahy namoy ny ainy tamin’ny môtô
Niharan’ny lozam-pifamoivoizana, tetsy Ankorondrano, ny môtô «scooter» iray nitondra lehilahy roa, mpirahalahy, ny alin’ny alahady lasa teo. Voadonan’ny fiara izy mirahalahy ireo ka nindaosin’ny fahafatesana vokatr’izany ny tovolahy iray, 22 taona. Efa eo am-pelan-tanan’ny mpitandro filaminana ny fanadihadiana. Nikasa hamonjy fodiana eny Ankadikely Ilafy ireto mpirahalahy vao erotrerony nitaingina môtô. Tokony ho tamin’ny valo ora alina no niseho ny loza. «Ny zandriny no nitondra ny môtô. Voadonan’ny fiara iray mini-bus marika « Toyota » avy any amin’ny sisiny havanana izy ireo. Samy nipitika avy teny ambony môtô izymirahalahy. Torana tsy nahatsiaro tena ilay zokiny», araka ny fitantaran’ny fianakaviana. Niezaka nanakana fiara nitondrana ny rahalahiny hamonjy hopitaly ilay zandriny. Voalaza fa nijanona fotoana vitsy teo amin’ny toerana nisehoan’ny loza saingy nanohy ny lalany kosa avy eo, ny fiara nandona. Nifanenjehana izy ka tratra tamin’io alina io ihany, araka ny nambaran’ny fianakaviana mana-manjo hatrany. Tokony ho telopolo minitra nahatongavany teny amin’ny hopitaly no tsy tana ny ain’ilay tovolahy, 22 taona. Ny lohany no tena voadona mafy ka nitarika tamin’ny fahafatesany. L’article Lozam-pifamoivoizana :: Tovolahy namoy ny ainy tamin’ny môtô est apparu en premier sur AoRaha.
Antananarivo sy ny manodidina: niraradraraka ny havandra
Tora-bato avy any an-danitra ny firaraky ny havandra teto Antananarivo sy ny manodidina omaly tolakandro. Narahin’orana nikija izany avy eo niaraka tamin’ny kotro-baratra sy tselatra namaky lanitra. Niraradraraka ny havandra naharitra 10 minitra teo teto an-dRenivohitra ary nitoraka hatrany atsimon’Antananarivo hatrany Bongatsara sy Ambatofotsy iny. Nanimba ny fambolena izany ary mampitomany ny tantsaha mihitsy. Orana maivamaiva kosa no nandrafitra ny toetr’andro ho an’ny faritra andrefan’Antananarivo iny, omaly. Nialohavana rifotra nifofo anefa izany ka nampitora-jofo ny vovoka sy nandrava ireo tafo sy takela-by teny amoron-dalana.Naharitra hatramin’ny alina ny oram-baratra ary nahafaly ny tantsaha tamin’iny faritra andrefan’Iarivo iny ny firaraky ny orana nanondraka indray ny voly. Anisan’ny nisitraka izany ireo mpamboly voninkazo izay tena miandry fatratra ihany koa ny filatsaky ny orana hampahazo aina azy ireny.Tatiana AL’article Antananarivo sy ny manodidina: niraradraraka ny havandra a été récupéré chez Newsmada.
Fanafihana miharo fandrobana: avotra ireo takalonaina efa-mianaka, tafaverina ny vola 11 tapitrisa Ar
Taorian’ny fifandonana tamin’ireo zandary sy ireo jiolahy mpanao fanafihana, avotra teny am-pelatanan’ireo olon-dratsy avokoa ireo efa-mianaka voatafika. Tranga niseho tao amin’ny fokontany Andranomaria, kaominina Tsiafajavona, ny 21 oktobra lasa teo tokony ho tamin’ny 1 ora maraina.Tafaverina koa ny vola mitentina 11 tapitrisa Ar voaroban’ireo olon-dratsy.Ankehitriny, jiolahy miisa roa voasambotra. Isan’izany ilay nanao fanamiana mpiandry fonja sy nitondra basy poleta vita gasy. Tratra, omaly maraina, kosa ny namany iray hafa raha mbola karohina ireo afa-nandositra.Tsiahivina fa niditra an-keriny tao amina tokantrano iray ireo jiolahy efa-dahy. Nilaza ho nirahin’ny sefo fokontany ireo olon-dratsy ka nandroba ireo vola mitentina 11 tapitrisa Ar tamin’ireo tompon-trano. Mbola nentin’ireo jiolahy koa ny raim-pianakaviana sy ireo zanany telo hahazoana vola ankoatra izay efa lasany. Teny an-dalana anefa, tafaporitsaka ireo zanaky ny tompon-trano ka nampandre avy hatrany ny zandary. Vokany, nidina teny an-toerana ny zandary avy ao Ambatolampy. Nanao sakana ihany koa ireo zandarimarian’Ambohimandroso sy Ambatotsipihina. Vokany, raikitra ny fifandonana sy ny fifampitolomana. Voasambotra ny jiolahy iray raha tafaporitsaka ny telo hafa. Taorian’ny fikarohana kosa, tratra omaly ny lehilahy iray hafa. Mbola karohina ireo namany roa. Henintsoa HaniL’article Fanafihana miharo fandrobana: avotra ireo takalonaina efa-mianaka, tafaverina ny vola 11 tapitrisa Ar a été récupéré chez Newsmada.